CUA: natao ho an’ny mpivarotra ny sisin-dalana | NewsMada
Niteraka resabe ny fandokoana ny sisin-dalana nataon’ny mpiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Nofaritana ho an’ny mpivarotra izany sisin-dalana izany eny Behoririka rehetra iny, raha ny fanazavan’ny avy ao amin’ny kaominina.
Tokony ho an’ny mpandeha an-tongotra ny sisin-dalana fa tsy ho an’ny mpivarotra. Manaiky lembenana manoloana ny di-dohan’ny mpivarotra, araka izany, ny kaominina matoa manokana ny sisin-dalana ho azy ireo.
Manaporofo izao fa tsy refesi-mandidy ny mpivarotra, tsy to teny koa ny tompon’andraikitry ny kaominina. Baranahiny tanteraka Antananarivo. Tsy omena hasiny ny mpandeha an-tongotra.
« Antananarivo tsy vita indray andro », « Efa ela no nisy mpivarotra ny sisin-dalana fa tsy vao izao ». Ireo ny nasesiky ny tompon’andraikitra rehefa niezaka nanadio tena manoloana ity raharaha ity.
Kajikajy politika kosa ny fandraisan’ny hafa izao fihetsika mivaona ataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra izao. “Fakana ny fon’ny mpivarotra izao hitsinjovana ny fifidianana ben’ny Tanàna manaraka eo”, hoy ireo mpanara-baovao.
Na ho inona na ho inona anefa, mihoatra ny tokony ho izy izao fihetsika asehon’ny kaominina izao. Ho an’ny mpandeha an-tongotra ny sisin-dalana, ho an’ny fiara ny arabe ary any an-tsena no tokony hisy ny mpivarotra.
Toraka izany ny zava-misy eny Besarety, avy hatrany, nitsangana ireo trano vy vao vita, tsy azo nandehanana ny lalana. Tsy misy ny fanalana ireo mpivarotra, tsy misy ny sazy ampiharina amin’ireo tsy manara-dalàna. Avela hanjaka ny gaboraraka.